‘बुद्ध चिनाउन कोस्टारिकामा’ - संवाद - नेपाल
‘बुद्ध चिनाउन कोस्टारिकामा’
गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् र उनको शान्तिरूपी शिक्षामै सुखद भविष्य छ भन्ने सन्देश दिन विदेशमा नेपाली विहार स्थापना गरेको हुँ ।
भिक्षु मैत्तेय, ३१, शान्ति, करुणा र भ्रातृत्वको कुरा गर्दा धेरै पाका लाग्छन् । मधेसी ब्राह्मण परिवारमा लुम्बिनीमा जन्मिएका अवधेश त्रिपाठीलाई जीवनमा सबैभन्दा कठिन समय बन्यो, भिक्षु बन्न अभिभावकबाट स्वीकृति लिन । उनले आफ्ना अभिभावकलाई मनाउन तीन वर्ष लाग्यो । एक दशकअघि भिक्षु जीवनमा प्रवेश गरेका भिक्षु मैत्तेयले अहिले दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोस्टारिकामा एलेग्रिया सेन्टर (नेपाली नाम आनन्द विहार) सञ्चालन गरेका छन् । अमेरिका, जर्मनी र क्यानाडाका विश्वविद्यालयमा अतिथि प्रोफेसरका रूपमा बुद्ध दर्शन पढाउँदै आएका उनीसँग गरिएको कुराकानी :
लुम्बिनीबाट एकैपटक कोस्टारिका किन पुग्नुभयो ?
म लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१०, महिलवारमा जन्मेको हुँ । हिन्दु परिवारभित्रको भए पनि मैले बौद्घ दर्शनलाई नजिकबाट देख्ने, सुन्ने र बुझ्ने मौका पाएको थिएँ । भिक्षु भएपछि ध्यान र पाठ मात्र होइन, अरू पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो । लुम्बिनीमा बोधी इन्स्टिच्युटमार्फत दुई विद्यालय र एक महिला विद्यालय सञ्चालन गरे । तर पनि यो दर्शनबाट म यति प्रभावित भएँ कि यसलाई विश्वव्यापी बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो । यसैले म कोस्टारिका पुगेँ । विहार पनि सञ्चालनमा आयो ।
कोस्टारिका नै किन रोज्नुभयो ?
सुरुदेखि नै विदेशमा पनि नेपालको विहार होस् भन्ने चाहना थियो । अर्को कुरा, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् र उनको शान्तिरूपी शिक्षामै सुखद भविष्य छ भन्ने सन्देश दिन विदेशमा नेपाली विहार स्थापना गरेको हुँ ।
विहार नै किन ?
भारत र चीनले बुद्धिज्म हाम्रो हो भनिरहेका छन् । तर, हाम्रो विहारमा हामी बुद्धिज्म नेपालको हो भनेर तर्कसहित ज्ञान दिन्छौँ । कोस्टारिकाको विहार पुग्नेहरू शान्तिप्रेमी पर्यटक नेपाल कस्तो रहेछ भनेर आउन लालायित हुन्छन् ।
निकै परको मुलुकमा विहार सञ्चालन गर्ने संयोग कसरी जुर्‍यो ?
चाहना त निकै पहिलेदेखि थियो । तर, यो संयोग मेरै धर्मआमा क्यानेडियन नागरिक बोधी गुरुमा लोरी फोस्टरले जुराइदिनु भयो । बोधी गुरुमा क्यानाडा सरकारको वातावरण वैज्ञानिक हुनुहुन्छ । गुरुमामार्फत भेट भएका जर्मन नागरिक फ्रेन्च निरहफले आफ्नो ६० रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेका घरहरू नेपाली भिक्षुलाई प्रदान गरेपछि विहार सञ्चालन सम्भव भएको हो ।
ती जर्मन नागरिकले सहयोग गर्नुको कारण के रहेछ ?
१२ वर्ष लुफथान्सा एयरको एयरबस चलाएका ती जर्मन नागरिक बुद्धका अनुयायी पनि हुन् । नेपालमा जन्मिएका बुद्घको दर्शनलाई सर्वव्यापी बनाउनुपर्छ भन्ने सोच रहेछ उनको । विश्वका पर्यटकको घुइँचो लाग्ने कोस्टारिका उपयुक्त थलो हुने भएकाले उनले सहयोग गरेका हुन् ।
तपाईंले सञ्चालन गर्नुभएको विहारले नेपालका सन्दर्भमा के योगदान दिन सक्ला ?
प्रशान्त महासागरसँगै रहेको विहारमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन हुने गरी नेपाली बौद्ध कला, संस्कृति र परम्परा कायम राख्छौँ । बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने सन्देश दिन्छौँ । विहार आउने पर्यटकलाई नेपालसँग नजिकको नाता जोड्छौँ । नाफा कमाउने उद्देश्य छैन । बुद्ध शिक्षा र नेपालको बौद्ध पर्यटन प्रवद्र्धन नै मुख्य उद्देश्य हो ।
‘अब फिल्ममा आउँछु’ – प्रकाश सपुत
‘आधारभूत सुधार नगर्ने, कस्मेटिक काममा भुल्ने ?’– गगन थापा, कांग्रेस नेता
‘स्टुपिड भएछु सायद’!
‘हेलमेट हल्ला मात्रै’
‘कीर्तिमान तोडिए झन् खुसी हुनेछु’
‘यो कोकोहोलोको कुनै काम छैन’– मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा
‘आज जे छु, भोलि हुन्नँ भनेर बुझ्नुपर्छ’
‘दाताको पैसाले अभियानको मर्म मर्छ’
कन्हैया कुमारसँग नेपाल-वार्ता : 'राजनीतिमा नयाँ अनुहार आएको पुरानाले सहँदैनन्'